Kugovera Zvekudyidzana Martech Zone
Chipiri, Kurume 19, 2013 Chipiri, Kurume 19, 2013 Amol Dalvi
Vazhinji vatengesi vanonzwisisa kukosha kwekushandisa vezvenhau kusangana nevatengi, kuvaka chiziviso cherudzi uye kugadzira zvirevo, asi makambani mazhinji achiri kunetseka. Unoita sei tarisiro padanho rega, kuratidza kukosha kwekambani yako uye pakupedzisira unoishandura kuva vatengi?
Kune bhizinesi pane kukosha kushoma pakuve nezviuru zvevateveri veTwitter kana pasina munhu ari kutenga kubva kwauri. Inovira kusvika pakuyera mhedzisiro uye kuratidza zviri nyore kana zvauri kuita zviri kushanda.
At Right On Interactive isu takanangana nekutsvaga nzira dzakanakisa dzekuyera budiriro, uye tinozviita nekukora akasiyana matanho ekubatana. Right On's yekumachina injini inoteedzera zviitiko zvese nekudyidzana kwakatenderedza zita rako. Tiri kuroora kushamwaridzana.
Ngatitarisei paemail semuenzaniso. Iwe unotumira zvaunotarisira tsamba yako yemwedzi neemail. Chero ani anovhura anowana poindi. Kana ivo vakadzvanya pane iyi link muemail ndiyo imwe poindi. Kana izvo zvikashanyira peji rako rewebhu, vanowana mamwe mapoinzi. Vanogamuchira vane mapoinzi akawanda ndivo vanonyanya kubatikana.
Right On's nyowani Twitter kubatanidzwa iri kuunza iyo imwecheteyo pfungwa kune vezvenhau.
Nekutevera zviitiko zvese zvinoitika kutenderedza account yemushambadzi isu tinokwanisa kukwevera icho chiitiko pasi muRight On's yekumisikidza injini uye nekupa kukosha kumatanho akasiyana ekubatana.
Nei ROI Yemagariro Scoring Yakasiyana
Mazhinji ezvazvino zvigadzirwa zveTwitter kunze uko kune zvigadzirwa zvekusimudzira. Iwe unonyorera chimwe chinhu kune yemagariro enhau account uye unovimba kuti inowana retweets kuitira kuti igone kusvika kune vakawanda vateereri. Izvo zvinoita sekuisa bhodhi padhuze nemugwagwa mukuru uye uchitarisira kuti vanhu vazhinji vanozviona.
At Right On Interactive isu takanangana nekurova uye kuita, kwete kukwidziridzwa. Isu tinofarira kuziva uye kurovera matenga masaini. Nekubatsira vatengi kuti vanzwisise nezve yavo yemagariro midhiya kushambadzira kuyedza ivo vanogona kukurumidza kuona kuti ndedzipi nzira dzinonyanya kushanda.
ROI's Social Scoring inogadziriswa zvizere
Iko kusanganisa kunokwevera mune rese data rakakomberedza account yeTwitter sevateveri vatsva, brand kutaurwa, retweets uye yakananga mameseji. Chero chezviitiko izvi zvinogona kupihwa zvibodzwa, nemushambadzi achidzora zvibodzwa. Yakanyatsogadziriswa.
Semuenzaniso, muteveri mutsva anogona kupihwa poindi imwe chete. Retweet inogona kunge yakakodzera maviri. Kana tarisiro yakananga mameseji iyo account iyo inogona kuve yakakosha gumi mapoinzi. Vashambadziri vanogona kugovera kukosha kuzvinhu zvekuita zvavanofunga kuti zvakakosha uye zvinobudirira.
Kuziva Inotungamira Inotungamira kuburikidza ne ROI Yemagariro Scoring
Iyo nyowani Twitter yekubatanidza ikozvino yakajairwa ficha ye Right On ari kurovera software. Iyo inokutendera iwe kushandura vasingazivikanwe vateveri mune chaiko kutaurirana mune yako kambani dhatabhesi. Kubatanidza kambani yeTwitter kutaurirana uye dhatabhesi inobvumira timu yekushambadzira kuti ishandise zvirinani zvese zvekuita zvakakomberedza zita.
Chimwe chezvinhu zvinonakidza zvinobatsira vatengesi kuti vaone zvinotungamira zvinotungamira, zvinova ivo vashandisi vanogadzira yakawanda yekubatana uye kudyidzana munguva pfupi yenguva. Nekutsvaga avo vashandisi nekukurumidza, unokwanisa kupfuudza inotungamira inotungamira kune timu yekutengesa nekukasira.
Iyi ingori imwe nzira nzira Right On Interactive iri kubatsira mabhizinesi kuti anyatsoita zvemagariro enhau.
Right On Inopindirana ndeye kushambadzira otomatiki anotsigira iyo Martech Zone.
Tags: facebook zvibodzwalead alamalinkedin zvibodzwatarisiro yekukorakurudyi pane kudyidzanazvemagariro zvibodzwatwitter kurova
Bhizinesi kune Bhizinesi Imwe Kushambadzira